ချောအိမာန် (မန္တလေး): အတောင်ညောင်းသွားတဲ့ငှက်
စက္ကန့်၊ မိနစ်တွေ တဖျပ်ဖျပ် ရွေ့လျားနေတဲ့အကြားမှာကျွန်မက ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ တိမ်စိုင်တချို့ကို အငမ်းမရ ရှာဖွေမိတယ်။ ဆောင်းကြွင်းမှာကျန်တဲ့ နှင်းစက်လေးတွေက ခပ်ဖျော့ဖျော့ မီးရောင်အောက်မှာ တလက်လက်တောက်ပလို့…။------------------------------------လောကမှာ တက်လိုက်၊ ဆင်းလိုက်၊ မြင့်လိုက်၊နိမ့်လိုက် အတက်အဆင်းတွေက ဓာတ်လှေကားလို ကျွန်မရဲ့ သက်ပြင်းတွေကလည်း အတက်အဆင်းတွေများပြီးစုပုံလို့နေပြီ။ ကျွန်မ တစ်ညလုံး ကဗျာတွေ ရွတ်ရလွန်းလို့ အာခေါင်တွေတောင် ခြောက်သွေ့နေပြီ။သူမက ကဗျာဆိုတဲ့ အနုပညာလေးတစ်ခုကိုတော့ လေးလေးနက်နက် ခံစားတတ်တာ ချီးကျူးမိတယ်။------------------------------------သူမနာမည်က 'မိုက်' တစ်လုံးတည်းလို့ပဲ သိခဲ့တယ်။အဖေက မြန်မာစစ်စစ်၊ အမေက နိုင်ငံခြားသူ။ ဖြူဖြူသေးသေး၊ ခပ်သွက်သွက်။ သိပ်အချောစားမဟုတ်ပေမယ့်ဘိုစပ်လေးမို့ ကြည့်လို့တော့ အဆင်ပြေပါတယ်။ မိုက်က သူ့အမေအကြောင်း ပြောလေ့မရှိ။ နိုင်ငံခြားမှာသေသွားပြီ။ ဒီလောက်ပဲ ကျွန်မ သိတယ်။ အဖေကတော့ သင်္ဘောမောင်းတယ်။ ဧရာဝတီမြစ်ကြောတစ်လျှောက်အလုပ်များတယ်။ အိမ်မှာ အမြဲတမ်း တစ်ယောက်တည်း တွေ့ရတာ များတယ်။ မိုက်မှာ အပေါင်းအသင်းသိပ်မရှိ၊ လက်ပွန်းတတီး ခင်မင်တာ ကျွန်မကိုပင်။ ကျွန်မနာမည် လီလီကို 'လီ' လို့ပဲ တစ်လုံးတည်းခေါ်လေ့ရှိတယ်။မိုက်ဆိုတဲ့နာမည်က ယောက်ျားနာမည်ဆန်နေတာကို သူမက သိပ်မနှစ်သက်။ မြန်မာလို အဓိပ္ပါယ်ပြန်လိုက်ရင်လည်းမိုက် ဆိုတာ ဆိုးတာ၊ မိုက်တာမျိုး အဓိပ္ပါယ်ရနေတာမို့ ပိုမကြိုက်ဘူးလို့ ပြောလေ့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ ဗန်းစကား အနေနဲ့သုံးရင် မိုက်ဆိုတာ မိုက်တယ်၊ လန်းတယ်၊ ကောင်းတယ်၊ ခေတ်မီတယ်လို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်ဟာလို့ ကျွန်မက ပြောပြရင် သြော် တကယ်လား ဆိုပြီး သူမက သဘောကျသွားတယ်။------------------------------------'ဒါကြောင့် လီ့ကို သဘောကျတယ်။ ငါ စိတ်ချမ်းသာအောင်နင် အမြဲပြောတယ်'လို့ မိုက်က မပီသံလေးနဲ့ ပြောတတ်တယ်။ မိုက်ကဆယ်နှစ်လောက်ထိ ဒီမှာ ကျောင်းနေဖူးပြီး နိုင်ငံခြားမှာ ကျောင်းသွားတက်လိုက်သေးတယ်။အသက်နှစ်ဆယ်မှ ဒီကိုပြန်ရောက်လာတာ။ စိတ်ထဲ သူ့အမေ သေသွားလို့ ပြန်လာတာလို့ ထင်တယ်။သူ့မိသားစု အကြောင်းကို ကျွန်မက ဘယ်တော့မှ မမေးဖြစ်။ မိုက်က ပြောပြသလောက်သာ နားထောင်မိတယ်။မိုက်က တခြားအဖော်ကို မမက်ပေမယ့် ကျွန်မကိုတော့ ခင်မင်တယ်။------------------------------------'လီ၊ နင်က ဘယ်လိုလေးမှန်းမသိဘူး။ ငါက နင့်ကိုခင်တယ် နင်ကရော ငါ ခင်သလို ခင်ရဲ့လား'လို့ တစ်လုံးစီ ပြန်မေးတတ်တယ်။'ခင်တာပေါ့''မိုက်မှာ Friend အများကြီးမရှိဘူး။ နိုင်ငံခြားကသူငယ်ချင်းတွေ ရှိတယ်။ နင် လီ လောက် မခင်ဘူး''ဟုတ်လား၊ ဘာဖြစ်လို့ ငါ့ကို ပိုခင်တာလဲ၊ ပြောပါဦးမိုက်''ဘာလို့လဲ၊ လီက ငါ့ကို အများကြီးလိုတာ ကူညီပေးတယ်။ဟိုမှာ သူငယ်ချင်း အများကြီးရှိတယ်နော် မကူဘူး။ ကိုယ့်အလုပ်ပဲ Interest ဖြစ်တယ်။ နင်နော်၊လီ အားအား၊ မအားအား မိုက် ပြောရင် အားလုံး all,all ဖြစ်တယ်။ လုပ်ပေးတယ်။ ဒါကြောင့်လေငါ ပိုခင်ရတာပေါ့'------------------------------------မိုက်ရဲ့ ဟန်ပါပါအပြောကြောင့် ကျွန်မ ရယ်မိတယ်။'Why ဘာကြောင့် ရယ်သလဲ လီ''သဘောကျလို့ပါ''why? why?''သြော်၊ ငါက မိုက်လိုတာတွေ လိုက်မလုပ်ပေးရင်မခင်ဘူးပေါ့၊ ဟုတ်လား''why not နိုး''မိုက် စိတ်ထဲက အလိုလိုသိတယ်။ အလိုလို ဖြစ်လာတဲ့စိတ်လေ။ မိုက် နှစ်ဆယ့်သုံးနှစ်ရှိပြီ၊ လိမ်မပြောဘူး။ လိမ်ပြောရင် God မကြိုက်ဘူး'မိုက်က လက်အုပ်လေးချီပြီး ပြောလိုက်တာမို့ကျွန်မ ပိုသဘောကျမိတယ်။------------------------------------'ဘယ်သူပြောလဲ၊ ဘုရားက မကြိုက်ဘူးလို့''Father Say''အေးပါ''လီ၊ နင် ငါ့ကို မကြိုက်တာ ဘာများရှိလဲ''မရှိပါဘူး၊ နင်လည်း ခင်ဖို့ကောင်းတဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ပါ''It's True''Yes''ငါ ဝမ်းသာပါတယ် လီ။ တစ်နေ့နေ့ကျရင် လီ ငါ့ကိုသူငယ်ချင်း မဖြစ်ချင်တော့မှာ၊ ငါ့ကို မခင်တော့မှာ ကြောက်မိတယ်''ဘာဖြစ်လို့ မခင်ရမှာလဲ၊ မိုက် ဘာဖြစ်လို့အဲဒီလို တွေးတာလဲ''I don't know ok let it be'မိုက်က ထားလိုက်ပါတော့ ဆိုတဲ့ စကားလေးနဲ့ ထားလိုက်တယ်။------------------------------------မိုက်နဲ့ ကျွန်မ နောက်ပိုင်း ပိုခင်မင်လာကြတယ်။အဲဒီ အချိန်ထိ ကျွန်မစိတ်ထဲမှာ ခင်မင်စွာ မိုက်နဲ့ ကျွန်မဟာ တတွဲတွဲ။------------------------------------ကျွန်မက မြန်မာစာ ဒုတိယနှစ် ကျောင်းသူ။ မိုက်ကတော့ ဒီကကျောင်းတွေကို ဆက်မနေပေမယ့် ဟိုမှာ ကျောင်းနေခဲ့တာမို့ အင်္ဂလိပ်စာရတယ်။ မြန်မာကဗျာတွေဝါသနာပါတယ်။ ဆရာဇော်ဂျီ၊ ဆရာမင်းသုဝဏ် ကဗျာတွေကို သူကြိုးစားဖတ်လေ့ရှိသလို မြန်မာရုပ်ရှင်ကိုလည်းနှစ်သက်တယ်။'လီ၊ ဆရာဇော်ဂျီ ရေးတဲ့ မဗေဒါ ကဗျာကို မိုက်သိပ်ကြိုက်တာပဲ'------------------------------------'အဲဒီ ဗေဒါပန်းကို မိုက် တစ်ခါ အင်တာနက်မှာမြင်ဖူးတယ်။ အပြင်ဘက်မှာ မြင်ဖူးချင်လို့ လိုက်ပြပါလား'လို့ ပူဆာတဲ့ မိုက်ကို ပုသိမ်ကြီးဘက် ဆိုင်ကယ်နဲ့တင်ပြီး ခေါ်သွားရတယ်။ ကွင်းကျယ်ကျယ် ရေစပ်နားက ဗေဒါရောင် ဗေဒါပင်တွေကို မြင်တော့ မိုက်ကဝမ်းသာအားရခုန်ပြီး …'အိုး၊ Very Beautiful အများကြီးပဲ ၊ လှတယ်နော်လီ''မိုက် ကင်မရာပါတယ်။ ဓာတ်ပုံရိုက်မယ်၊ လီ လည်းရိုက်ပေးဦးမယ်။ မိုက်လည်း ရိုက်မယ်'ကင်မရာ တချိန်ချိန်နဲ့ မိုက်နဲ့ ကျွန်မ ဗေဒါတွေနောက်ခံထားပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်ကြတယ်။'လီ၊ သီချင်းထဲမှာပါတဲ့ ဘဲအုပ်က တစ်ရာ နှစ်ရာဆိုတာ ဟိုစားတဲ့ ဘဲကိုပြောတာလား'မိုက်ရဲ့ နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်အမေးကို ကျွန်မသဘောကျမိတယ်။ သူ သိချင်ရင် အဲဒီလိုပဲ မရပ်မနား မေးတတ်တယ်။'ဟုတ်တယ်၊ မိုက် ပြောတာမှန်တယ်။ ဒီနားမှာတော့မရှိဘူး။ ဘဲကင်၊ ဘဲသား ချက်စားတဲ့ အကောင်ကို ပြောတာ၊ Duck''သြော်'မိုက်က ဆက်တွေးနေသလိုဟန်ရှိပြီး မေးခွန်းထုတ်ဖို့ဆက်စဉ်းစားနေပုံပဲ။'ဘဲအုပ်က တစ်ရာ၊ နှစ်ရာ မဗေဒါ တစ်ပင်တည်း ပန်းပန်လျက်ပဲဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲ၊ ဘာပန်းကို ပန်တာလဲ''အဲဒီလို ပန်းပန်တာကို ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ ဒီလိုရေပြင်ကျယ်ကြီးမှာ ဗေဒါပင်တွေ ရှိတယ်မဟုတ်လား။ အဲဒီ ဗေဒါပင်လေးကို ဘဲအုပ်တွေက ရာချီပြီးထိုးကြ၊ ဆိတ်ကြ၊ ဖျက်ဆီးကြလည်း ဒီဗေဒါပန်းလေးက မမှုဘူး။ အပြုံးမပျက်ဘူး။ ဆိုလုတာက လူ့ဘဝတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးပြောပြတာ။ အရှုံးမပေး၊ စိတ်ဓာတ်မကျတဲ့သဘော။ အားမာန်ဖြစ်စေတဲ့ အသုံးအနှုန်းပေါ့''သြော်၊ သြော် I see I see I Like'ဒီလို ပန်းပန်လျက်ပဲ သီချင်းကို ကြိုက်ပြီး ဗေဒါပန်းလေးကို အားကျခဲ့တဲ့ မိုက်ခုရော ဗေဒါပန်းလေးလို အားတင်းနိုင်ပါ့မလား။မိုက်က နောက်ပိုင်းမှာ ကျွန်မကို အားကျကြောင်းပြောလာတယ်။ တစ်ခါတလေ သူ့ရဲ့ ဆွေးဆွေးမြည့်မြည့် ပုံစံလေးကို မြင်ရတယ်။ သူ့ရင်ထဲမှာခံစားချက် တစ်ခုခုရှိလိမ့်မယ်လို့ တွေးထင်မိတဲ့အတိုင်း မိုက်က တစ်နေ့တော့ ကျွန်မကိုရင်ဖွင့်လာတယ်။အဲဒီနေ့က ရန်ကင်းတောင်ကို သွားတဲ့နေ့။ ကောင်းကင်မှာပျံသန်းနေတဲ့ ငှက်တစ်အုပ်ကို မိုက်က လိုက်ကြည့်နေတယ်။ မန္တလေး ဗယာကြော်ကို မိုက်က သိပ်ကြိုက်တာမို့အကြော်ဆိုင်တစ်ခုမှာ ဗယာကြော်တွေ မှာစားကြတယ်။'ဒီ အရည် သိပ်ကောင်းတာပဲနော် လီ''အချဉ်ရည်လေ၊ မန်ကျည်းမှည့်နဲ့ လုပ်ထားတာ''ခရမ်းချဉ်အနှစ်ထက် ဒီဟာကို မိုက် ပိုကြိုက်တယ်။မိုက် Mother လည်း ကြိုက်လိမ့်မယ်ထင်တယ်''မိုက်အမေ ဟိုမှာရှိလား။ အမေနဲ့ အဆက်အသွယ်ရှိလား''နိုး မရှိဘူး၊ ပြန်လာကတည်းကလေ၊ ဟိုမှာ မိုက်မပျော်ဘူး''သြော်'ကျွန်မက မသိချင်သလိုနဲ့ မိုက်ကို ဆက်မမေးတော့ဘဲအကြော်ပဲ စားနေလိုက်တယ်။'လီကို အားကျတယ်''ဘာဖြစ်လို့လဲ''လီ အမေက သိပ်ချစ်တဲ့ပုံပဲနော်၊ ချစ်တယ် မဟုတ်လား''အင်း - ချစ်တာပေါ့''မိုက် ပြောပြမယ်၊ မိုက် အမေက မိုက်ကို မချစ်ဘူး''မဟုတ်လောက်ပါဘူး''လီ မသိပါဘူး၊ မိုက်ကို ကျောင်းထားပေးရုံပဲ၊လီ့ အမေလိုမျိုးမ ဟုတ်ဘူး။ နောက်ပြီး ဟိုမှာ Married လုပ်လိုက်တယ်လေ။ အဲဒါကို မိုက်စိတ်အဆိုးဆုံးပဲ''ဟယ် - ဟုတ်လား၊ ဒါဆို မိုက် အဖေနဲ့က''ကွဲနေတာပေါ့၊ ကွဲသွားပြီပေါ့။ ဒါကြောင့် မိုက်ပြန်လာတာ။ မိုက် မြန်မာပြည်ကို ပိုကြိုက်တယ်။ မိုက် အမေနဲ့ စကားများကြတယ်။ မိုက်လည်းကျောင်းမတက်တော့ဘဲ ပျော်သလို နေပစ်လိုက်တယ်။ အမေက မိုက် ခံစားရတာကို မသိပါဘူး။ မိုက်ပြန်လာတော့ အဖေက ဒီမှာ အရင်လို စီးပွားရေးမပြေလည်ဘူး။ အကြွေးတွေ များနေပြီ။ မိုက်ကလီ့မိသားစုလို နေချင်တာ။ လီ့မေမေဆို မိုက်ကိုလည်း ချစ်တဲ့ပုံပဲ''ဟုတ်တယ်၊ ချစ်တယ်''လီတို့ Family ကို ကြည့်ရတာ ကောင်းတယ်။ ပျော်တယ်လေစိတ်ထဲမှာ''အားမငယ်ပါနဲ့ မိုက်ရယ်၊ ငါတို့ အမြဲရှိပါတယ်။အကူအညီလိုရင်ပြောပါ၊ တတ်နိုင်သလောက်ပေါ့''Sure''သေချာပါတယ် မိုက် ရဲ့'မိုက် မျက်ဝန်းညိုညိုလေးက တောက်ပလာတယ်။အဲဒီနေ့ကမှ မိုက် အကြောင်းကို စိတ်မကောင်းစွာသိလိုက်ရတယ်။ မိုက် ကျွန်မဆီက ဘာအကူအညီမှ မတောင်းခဲ့ဖူးပါဘူး။ အဲဒီလို မတောင်းခဲ့တာကဘဲမိုက် မှားတာလား။ ကျွန်မ မိုက်အပေါ်မှာ အပြစ်တင် စောသွားတာလား။ မဝေခွဲခြားတတ်တော့။------------------------------------မိုက်နဲ့ ကျွန်မရဲ့ နေ့ရက်များဟာ ပျော်ရွှင်စရာကောင်းခဲ့ပါတယ်။ကျွန်မက သူငယ်ချင်းများသူမို့ အိမ်ကို သူငယ်ချင်းတွေ လာခေါ်သွားလို့ ပါပါသွားတတ်တယ်။ပြန်လာရင် ကျွန်မအိမ်ရှေ့လှေကားကနေ ထိုင်စောင့်ပြီး မျှော်နေတတ်တယ်။ ဘယ်လောက် အိမ်ထဲဝင်ခိုင်းခိုင်း ဝင်လေ့မရှိဘူး။ ကျွန်မကို တွေ့ရင် ဝမ်းသာပျော်ရွှင်ပြီး ထမင်းပါ ဝင်စားတတ်တယ်။သူ့အဖေ မရှိတဲ့အချိန်တွေဆို အိမ်မှာ ထမင်းလာစားဖို့ပြောရင် ကြုံမှပဲ စားလေ့ရှိတယ်။ဝင်စားတိုင်း ကျွန်မတို့အိမ်က ဟင်းတွေကို သိပ်သဘောကျတယ်။ ကျွန်မ မေမေက ရှေးပုံစံရိုးပြီးတောသူမို့…'သမီး စားလို့ မြိန်ရဲ့လား'လို့မေးရင် မိုက် နားမလည်တော့ဘူး။ကျွန်မက စားကောင်းလား၊ အရသာရှိလားလို့ မေးတာလို့ထပ်ရှင်းပြရတယ်။အဲဒီလို သူ မသိတဲ့ စကားလုံးအဆန်းကြားရင် မှတ်ထားလေ့ရှိတဲ့သူကစာအုပ်လေးထဲ ချက်ချင်းမှတ်တယ်။ ပြီးရင် သောကြာသမီးလိုပဲ ပြောတော့၊ မေးတော့တယ်။'လီ စားကောင်းလား၊ ကောင်းနဲ့မြိန်ကလည်းSame လား''အေး - ဟုတ်တယ် အတူတူပဲ''အိုကေ၊ အတူတူ၊ မေ့နေတယ်၊ အဲဒီစာလုံးကို၊ တူတူ၊ဒါဆိုရင် Very Good ပေါ့''အေးပေါ့၊ ကောင်းနဲ့ Good အတူတူပဲ''မြန်မာဟင်း အရသာ နည်းနည်းငန်တယ် သို့သော်လျှာပေါ်စွဲတယ်''သို့သော်က စာရေးသလိုဖြစ်နေတယ်။ စကားပြောရင်ဒါပေမဲ့လို့ ပြောလေ၊ မေ့သွားတာလား''Yes Yes Forgot နည်းနည်းခက်တယ်၊ မှတ်ရတာကများတယ်'မိုက်က သဘောကျစွာရယ်တယ်။ ကျွန်မ စိတ်ထဲတော့သူမဟာ ဥာဏ်အရမ်းကောင်းတယ်လို့ ထင်တယ်။ဒီလိုနဲ့ ကျွန်မ စာမေးပွဲဖြေချိန်တွေမှာ မိုက်ကအလိုက်သိစွာ အိမ်မလာပါဘူး။ စာမေးပွဲဖြေပြီးသွားမှ တွေ့ဖြစ်ကြတယ်။ ကျွန်မကို တွေ့တွေ့ချင်းစာမေးပွဲဖြေနိုင်လား၊ ဖြေနိုင်လားနဲ့ မေးတယ်။ အဲဒီနေ့က ကျွန်မနဲ့ စကားပြောနေတုန်း ဖုန်းလာတာကြောင့်ခဏအပြင်သွားစရာရှိတယ်ဆိုပြီး အိမ်တံခါး သော့ပိတ်တော့ ကျွန်မလည်း ပြန်လာခဲ့တယ်။ သူ့အဖေကတစ်ပတ်တစ်ခါလောက်မှ အိမ်ပြန်လာတာမို့ မတွေ့ရဘူး။ မိုက် ဘယ်လိုများ စားနေရလဲဆိုတာ တွေးမိတယ်။ဒီတစ်ခါ မိုက်ကို ကြည့်ရတာ တစ်မျိုးဖြစ်နေသလိုခံစားရတယ်။ ဘာမှန်းတော့ အဖြေမရှာတတ်။ အဲဒီကိစ္စ မသိမသာ ပျောက်သွားပေမယ့် မိုက်အပေါ်ခံစားမှုအသစ်ကတစ်နေ့မှာ မမျှော်လင့်ဘဲ ထပ်ဖြစ်လာပြန်တယ်။အဲဒီနေ့က အရေးတကြီးဟန်ပန်နဲ့ ကျောက်ဆည်ကိုလိုက်ပို့ပေးပါတဲ့။ ဒါနဲ့ ကျွန်မတို့နှစ်ယောက် ဆိုင်ကယ်နဲ့ ထွက်ခဲ့ကြတယ်။ မိုက်ပြောတဲ့လိပ်စာက တိတိကျကျ မသိပေမယ့် ဖုန်းနှစ်ကြိမ်လောက် ဆက်မေးအပြီးမှာ ခပ်ကျယ်ကျယ် ခြံတစ်ခြံရှေ့ရောက်လာတယ်။တစ်ထပ်တိုက်ဖြူဖြူအိမ်လေးကို တွေ့ရပြီး ဆိုင်ကယ်ဟွန်းတီးလိုက်တာနဲ့ လူကြီးတစ်ဦး ထွက်လာတယ်။အဲဒီလူကြီးက -'ဂရေစ် လာလေ'လို့ခေါ်တယ်။ကျွန်မ နားမလည်သလိုနဲ့ မိုက်ကိုကြည့်မိတော့မိုက်က'ငါ့ကိုခေါ်တာပါ'လို့ ပြောတယ်။မိုက်နာမည်က ဘာလို့ ဂရေ့စ် ဖြစ်သွားလဲမသိ။သူတို့နှစ်ယောက် စကားတိုးတိုးပြောပေမယ့် ကျွန်မ မကြားရဘူး။ မိုက်က ခဏနေတော့ ကျွန်မကိုစောင့်ပေးလို့ရမလား ကိစ္စလေးရှိလို့ လို့ပြောတယ်။ ကျွန်မလည်း ရပါတယ်။ ဒန်းပေါ်ကပဲ စောင့်နေမယ်ဆိုပြီးအိမ်ထဲ မဝင်တော့ဘူး။ နည်းနည်းတော့ကြာမယ်နော်လို့ မိုက်က ထပ်ပြောလိုက်တာမို့ ရပါတယ်။ငါ ဒီမှာ စာအုပ်ဖတ်နေမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ လူကြီးကလည်း အိမ်ထဲက ဂျာနယ်တွေ တစ်ပွေ့တစ်ပိုက်ထုတ်လာပေးတယ်။ဂျာနယ်ဖတ်ရင်း မိုက် အရောင်းအဝယ် လုပ်နေပြီလို့ထင်တယ်။ အရင်ကလည်း မိုးကုတ်က အဆက်တွေနဲ့ နည်းနည်းလုပ်ဖူးတယ်တဲ့။ သူတို့ကိစ္စမှာ ပစ္စည်းပြ၊အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ရင် ငွေချေကြနဲ့မို့ သူတို့နဲ့ အတူ မရှိချင်ပါ။ မိုက်ကို ကူညီချင်တယ်။ကူညီရုံသက်သက်မို့ ဘာ မျှော်လင့်ချက်မှ မရှိ။ဂျာနယ် လေးငါးစောင် ဖတ်ပြီးတဲ့အထိ အိမ်ထဲကနေဘာသံမှမကြား။ စကားသံသဲ့သဲ့တောင် မကြားရ။ ဒီအိမ်မှာလည်း ဒီလူကြီးတစ်ယောက်တည်း နေတာလားလို့အတွေးက ဝင်လာပြန်တယ်။ မှုခင်းတွေထဲမှာဆိုရင် ဒီလို အရောင်းအဝယ်တွေလုပ်ရင်း လူသတ်မှုတွေဖြစ်လိုဖြစ်နဲ့။ တွေးရင်းနဲ့ မိုက်အတွက် စိုးရိမ်စိတ်တွေ ဝင်လာတယ်။ ဒီလောက်ကြာရသလား။အိမ်ထဲကို ရပ်ကြည့်တော့လည်း အရိပ်အယောင်မတွေ့။ ဧည့်ခန်းကြီးက အတွင်း အလယ်လောက်မှာ။ခုဆို မိနစ်ငါးဆယ်လောက် ရှိပြီ။ ဝင်ပြီး ခေါ်ရမလား။ အလိုလို မိုက်ကို စိတ်တိုလာမိတယ်။ကျွန်မ တစ်ယောက်လုံး အပြင်မှာ စောင့်နေတယ်၊ ရှိနေတယ်ဆိုတာ သတိမှ ရရဲ့လား။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလောက်ကြာဖို့ မသင့်။ အော်ခေါ်မယ်လုပ်တုန်း အထဲက အသံကြားလာရတယ်။'ဖြည်းဖြည်းပြန်နော်၊ သူငယ်ချင်း စောင့်နေတာအားနာစရာကောင်းတယ်။ ကျေးဇူးနော်၊ အလုပ်ကိစ္စက မပြတ်လို့'ကျွန်မ မျက်နှာနီပြီး စိတ်တိုနေပြီဆိုတာ မိုက်သိလောက်ပြီ။ ဘာမှမပြောတော့ဘဲ ဆိုင်ကယ်ကိုသာ မောင်းထွက်လာခဲ့တယ်။'လီ၊ မိုက်ကို စိတ်ဆိုးသလား။ ငါ ပိုက်ဆံလေးရစရာရှိလို့ပါဟာ''နင် အဆင်ပြေခဲ့လား မိုက်''ပြေတယ်၊ လီကို နှစ်သောင်းပေးမယ်''မယူပါဘူး၊ နင် အဆင်ပြေရင် ပြီးတာပဲ''ပြေပါတယ်။ ဒီကို နှစ်ပတ်တစ်ခါလောက် လာရမယ်''ဟင် - ဘာဖြစ်လို့လဲ၊ သူက မန္တလေး မလာဘူးလား''အင်း - မလာနိုင်ဘူးဆိုပါတော့။ ဒါပေမဲ့ နောက်ခါမိုက် ဘာသာ လာပါ့မယ်''မိုက်၊ နင်တစ်ယောက်တည်းလာလို့ ဘယ်ဖြစ်မလဲ။ဒီနေရာက နည်းနည်းလည်း ချောင်ကျနေသလိုပဲ။ နင်တစ်ယောက်တည်း လုံးဝမသွားနဲ့၊ နင့်ကိုလည်းစိတ်မချဘူး''ရပါတယ် လီရယ်၊ ငါ့ နာမည်အရှည်က မိုက်ဂရေ့စ်လေ။ သူ့ကို ဂရေ့စ် လို့ ပြောထားတယ်။ အမေ့ရဲ့ နောက်ဆုံး နာမည်စာလုံးပေါ့'ဒီလိုနဲ့ အိမ်ပြန်လာတော့ သူ့အိမ်ရောက်ရောက်ချင်းငွေနှစ်သောင်းပေးတာကို ငြင်းလိုက်တယ်။ မိုက်က တစ်သိန်းရခဲ့တယ်တဲ့။ ပွဲခတဲ့။ ကျွန်မမိုက်ဆီက မယူရက်ပါ။ သူ့စရိတ် သူရှာနေတဲ့ မိုက် အဆင်ပြေဖို့သာ အရေးကြီးတယ်။ ကျွန်မမှာမှောင်မည်းတဲ့ အတွေးနဲ့ မိုက် အပေါ်ကို မတွေးရက်ခဲ့ပါ။အဲဒီကအပြန် တစ်ပတ်အတွင်း ကျွန်မထံရောက်လာတဲ့ဖုန်းကြောင့်လူတစ်ကိုယ်လုံး ဒေါသဖြစ်တာရော၊ ခံပြင်းတာရော၊ ရှက်တာရော ပေါင်းစုံသွားတယ်။ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ။ ဘာပြန်ပြောရမှန်းမသိအောင်အံ့သြသွားခဲ့တယ်။'လီ …' ဆိုပြီး တစ်လုံးတည်း ခေါ်လိုက်တဲ့အသံအောအောကြီးကြောင့် ခုပြောတာ ဘယ်သူလဲလို့ မေးလိုက်တယ်။ ဒီတော့မှာ ဟိုတစ်ပတ်က မိုက်နဲ့အတူသွားတဲ့အိမ်က လူကြီးမှန်းသိရတယ်။ မိုက်ကိုများ ဘာပြောစရာရှိလို့လဲလို့ ပြောရင်း ဖုန်းနံပါတ်ပေးခဲ့တာကိုမိုက် ဘာလို့များ မပြောတာလဲလို့ တွေးမိတယ်။'သူနဲ့ မတွေ့ပါဘူး။ ပြောစရာလည်း မရှိပါဘူး။ခု လီ ကိုပဲ ပြောချင်တာပါ''ကိုယ် မန္တလေး လာမှာလေ။ လီ ဘာလိုချင်လဲ၊ ဝယ်ပေးမယ်လေ'ဆိုတဲ့ ပြီတီတီ အသံကြီးကြောင့် တော်တော်ရွံသွားတယ်။'ဒီမယ် - ရှင်ဘာတွေပြောနေတာလဲ။ နောက်တစ်ခါရှင် ဖုန်းမဆက်ပါနဲ့။ မိုက် မိတ်ဆွေတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဒီတစ်ခါတော့ သည်းခံလိုက်မယ်''နေပါဦး၊ မင်းသူငယ်ချင်းနဲ့ ကျွန်တော်က မိတ်ဆွေမဟုတ်ပါဘူး။ ဖောက်သည်ပါ။ လီကိုလည်း ဖောက်သည် အသစ်ရအောင် ဆက်တာပါဗျာ'ဆိုပြီး ဖုန်းချသွားတယ်။ရင်ထဲမှာ ရှုပ်ရှက်ခတ်ပြီး အရမ်းစိတ်တိုသွးတယ်။မိုက် ဘာတွေလုပ်နေတာလဲ။ ဒီကိစ္စ မိုက်နဲ့ ဖြေရှင်းမှ ဖြစ်တော့မယ်။------------------------------------ကျွန်မ မေးတဲ့ မေးခွန်းကို သေချာမဖြေ။ မိုက်ဝေ့လည်ကြောင်ပတ် လုပ်နေတယ်။ ကျွန်မ စိတ်မရှည်တော့ဘူး။ ဒီလူ ဘာဖြစ်လို့ အကြောင်းမဲ့ဖုန်းဆက်ပြီး ဒီလိုစကားတွေ ဘာဖြစ်လို့ ပြောရတာလဲ။ ကျွန်မ ဒီတစ်ခါ မိုက်ကို တော်တော်စိတ်တိုနေပြီ။'အဲဒီလူက ဘာလဲ၊ ဘာဖောက်သည်လဲ'ဆိုတော့ မိုက် ကျွန်မကို မကွယ်မဝှက် ပြောပြမယ်ဆိုပြီး…မိုက်ရဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို နားထောင်အပြီးမှာကျွန်မဟာ တော်တော်အပါလား။ တော်တော်ရိုးအလွန်းပါလားလို့ အောက်မေ့မိတယ်။ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းအပေါ်ဘယ်လိုမှ မထင်ရက်နိုင်တာလည်း ပါပါတယ်။ ဒီဘဝထဲ ရောက်နေတာ ကြာပြီဆိုပဲ။ နိုင်ငံခြားမှာကတည်းကမိုက် ဘဝ မလှပခဲ့ဘူးဆိုတာ သိရတယ်။ ဒီရောက်တော့လည်း…ကျွန်မကို ဟိုလူက မိုက် နဲ့အတူ ပါလာသူဆိုတော့တစ်မျိုးတစ်စားတည်း ထင်ပုံရတယ်။ ဘယ်လောက်ထိ ရှက်ဖို့ ကောင်းသလဲ။ ကျွန်မ မိုက်ကို အရင်ပုံစံလိုမျက်လုံးထဲမှာ ကြည့်မရတော့။ တစ်ခုခုကို ညစ်ထေးနေသလို ခံစားလိုက်ရတယ်။ အဲဒီအချိန်တုန်းကမိုက်ကို ဆွဲထုတ်ဖို့ မကြိုးစားခဲ့ဘဲ ကိုယ်တိုင် မိုက်ကို ရှောင်နေခဲ့တယ်။ မိုက်ကိုကျွန်မ ပြောခဲ့တယ်။ ငါ့ကို အသုံးချခဲ့တယ်လို့ ရှက်လည်း ရှက်တယ်လို့။ မျက်ရည်ကျပြောရင်းမိုက် အိမ်ကနေ ထွက်ပြေးခဲ့မိတယ်။တကယ်တော့ ကျွန်မဟာ ပြောခံလိုက်ရခြင်းအတွက်ရှက်ပြီး မိုက်ကိုလည်း ဒီလိုဖြစ်ရခြင်းအတွက် မပေါင်းသင်းချင်တော့သလို ဒေါသလည်းဖြစ်နဲ့ကျွန်မဘက်က စတင်လမ်းခွဲခဲ့တာပါ။ ဒီလိုနဲ့ တဖြည်းဖြည်း ဝေးကွာခဲ့ပါတယ်။ စိတ်ထဲမှာ သတိရစိတ်ရှိပေမယ့် တမင်ပဲ ရှောင်မိတယ်။ အိမ်ကလည်း နားမလည်နိုင်၊ ကျွန်မလည်း ရှင်းမပြတော့။တစ်ခါတလေ ဘဝမှာ အဲဒီအချိန်မှာ မှန်တယ်ထင်ပေမယ့်ကိုယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ မှားမှန်း နောက်မှ သိရတယ်။ သိပ်မကြာခင်မှာ မိုက်ဟာ ကျွန်မနဲ့ဝေးရာကို ဘယ်သူမှ အသိမပေးဘဲ ပျောက်သွားပါတော့တယ်။ သူ့အဖေ ပြန်လာတော့ ရှာတာလည်းမတွေ့။စာလေးတစ်စောင်တော့ ထားခဲ့တယ်။အဖေ စိတ်မပူပါနဲ့။ မိုက် တစ်နေရာမှာ ရှိနေမယ်လိုက်မရှာပါနဲ့ တဲ့။အဲဒီစာလေးကို ဖတ်ရင်း ကျွန်မ ရင်ထဲ ဝမ်းနည်းမိတယ်။မိုက် အရမ်းစိတ်ထိခိုက်သွားပြီလား။ တကယ်ဆိုကျွန်မ မိုက်ကို ကယ်တင်သင့်တယ်။ ခုတော့ မိုက်ဟာ စိတ်ထိခိုက်ပြီး ထွက်သွားတာလားလို့တွေးမိတယ်။ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်။တစ်နေ့ ပေါ်လာနိုးနဲ့ မျှော်လင့်ပေမယ့် သေချာပုန်းနေခဲ့တဲ့မိုက်ကို မတွေ့ခဲ့ရဘူး။ သူ့အဖေဆီတော့ စိတ်မပူဖို့ ဖုန်းဆက်တယ်တဲ့။ ဘာမှ မေးလို့မရအောင်မိုက်ဟာ အပုန်းကောင်းခဲ့ပါတယ်။ သူ့အဖေဆီလည်း ပိုက်ဆံ ပို့ပေးတယ်တဲ့။ တကယ်တော့ မိုက်ကျွန်မကို စိတ်ဆိုးသွားတာလို့ပဲ အောက်မေ့မိတယ်။ သေချာသိလိုက်ရတာတော့ ကျွန်မဘဝမှာ မိုက်ပျောက်ဆုံးသွားခြင်းဟာ တော်တော့်ကို ခြောက်သွေ့သွားခဲ့ပါတယ်။ သတိလည်းရ စိုးရိမ်စိတ်တွေလည်းရှိဆိုတော့နေလို့ မကောင်းခဲ့ဘူး။ ပုသိမ်ကြီးဘက် ရောက်တိုင်း၊ ဗေဒါပင်တွေမြင်တိုင်း သတိရမိတယ်။အဲဒီတုန်းက ဗေဒါပန်းကို ကိုင်ပြီး ရိုက်ထားတဲ့ ဆံပင်ညိုညိုတွေ နေရောင်မှာလွင့်ပြီးအစွမ်းကုန်ရယ်နေတဲ့ မိုက် ဘယ်တွေများ ရောက်နေပြီလဲ။ကျွန်မ တက္ကသိုလ်နောက်ဆုံးနှစ်အချိန်မှာ ကျောင်းသူ၊ကျောင်းသားတွေ စိတ်တူရာစုပြီး ပရဟိတ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့တည်ထောင်ဖြစ်တယ်။ လိုအပ်ချက်၊ အားနည်းချက်တွေရှိတဲ့နေရာတွေကို တတ်နိုင်သလောက်စုပြီး ကူညီလုပ်ပေးဖြစ်တယ်။ ဒီလုပ်ငန်းတွေထဲ စိတ်နှစ်ထားမှကျွန်မ မိုက်ကို ခဏတော့ မေ့နေနိုင်တယ်။ ဒီလိုလုပ်ရင်းနဲ့ အောင်ပင်လယ်ဘက်က ကျောင်းလေးတစ်ကျောင်းမှာသွားကူညီပေးကြတယ်။ အဲဒီမှာ ရောဂါဖြစ်နေတဲ့ လူအမျိုးမျိုးကိုလည်း တွေ့ရတယ်။ ပိုက်ဆံမရှိလို့မကုနိုင်တဲ့သူတွေကိုလည်း ကူညီကြရတယ်။ဒီလိုနဲ့ ဒီရွာမှာရောက်နေတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရှိတယ်။သူက ဆေးမကုဘူး။ အားလုံးက သူ့ကို အေအိုင်ဒီအက်(စ်) ရောဂါတဲ့။ သူ့ကိုတော့ မပြောပြဘူး။ဆရာဝန်ကလည်း လာကြည့်တုန်းက အဲဒီရောဂါလို့ ပြောတယ်တဲ့။ ကျွန်မတို့ အုပ်စုတွေများပြောရင်အဆင်ပြေနိုင်မလား၊ ဆေးကုချင်မလားဆိုပြီး အဲဒီအမျိုးသမီးရှိရာကို သွားကြတယ်။တဲအိမ် မှောင်မှောင်လေးထဲမှာ သူ့ကိုတွေ့လိုက်ရချင်းအသက်ရှူရပ်မတတ် အံ့သြသွားတယ်။ မိုက်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်လေးဟာ အရိုးပေါ်အရေတင်နေသလို အသားအရေတွေခြောက်ကပ်ကပ်၊ မျက်နှာမှာလည်း အနာတချို့။ သူ့ မျက်လုံးလေးက ကလယ်ကလယ်နဲ့ ကျွန်မကို တွေ့တွေ့ချင်းသူလည်း အံ့သြသွားတယ်။'မိုက် နင်…'ကျွန်မ လည်ချောင်းတွေနင်ပြီး စကားက ထွက်မလာ။'လီ၊ ဘယ်လိုရောက်လာတာလဲ''လီ ငါ နင့်စကားကို နားမထောင်ခဲ့ဘူး။ ခွင့်လွှတ်ပါဟာ''မိုက်၊ ငါ့ဘဝမှာ အမှားတစ်ခုကို ကျူးလွန်ခဲ့တယ်။အဲဒီအတွက် ငါ အမြဲနောင်တရနေတယ်။ နင့်ကို ငါ ဥပေက္ခာပြုခဲ့မိတဲ့ အမှားပေါ့''မဟုတ်ဘူး လီ၊ ငါ့မှာ အစောကြီးကတည်းက ဒီရောဂါရှိနေပြီ။ငါ ခု နောက်ဆုံးအချိန် ရောက်နေပြီ''မဟုတ်ဘူး။ မိုက်၊ နင် ဆေးမကုဘူးဆို၊ ဆေးကုရင်သက်သာမှာပါ''မသက်သာချင်တော့ဘူး လီ၊ ဒီမှာ ငါ ဒဏ်ခံနေတာပါ။အဖေ့ကို မသိစေချင်ဘူး။ ပိုက်ဆံ မပို့နိုင်တာကြာပြီဆိုတော့ စိတ်တော့ Worry ဖြစ်နေမယ်။အဖေ နေကောင်းလား လီ''ကောင်းပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ သူလည်း ခံစားနေရမှာပေါ့''ငါ့ရဲ့ပုံစံကို အဖေ့ကို မမြင်စေချင်ဘူး''မိုက်၊ ငါတို့ ကူညီမယ်''နေပါစေ လီ၊ ငါ မသေခင် လီ့ကို တွေ့ရလို့ ဝမ်းသာတယ်။တောင်းပန်ပါတယ် လီ''တောင်းပန်ဖို့ မလိုပါဘူး။ နင်နဲ့ ဝေးကွာသွားတဲ့အချိန်ကစပြီး ငါ အမြဲစိတ်မကောင်း ဖြစ်နေတယ်။''နင် ဗေဒါပင်လေးလို အားတင်းထားစမ်းပါ။ ငါ ဒီကိုအမြဲလာမယ်''မလာနဲ့ လီ၊ ခုတွေ့တာ နောက်ဆုံးဖြစ်ပါစေ''လာမယ် မိုက် နင် မတားနဲ့။ နင် ဘာဖြစ်ချင်လဲ၊ဘာစားချင်လဲ''ငါ မစားနိုင်တော့ဘူး။ ငါ လီနဲ့ နေခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေပျော်ပါတယ်။ အခု ငါ ဘာဖြစ်ချင်လဲ၊ ငါ လီရဲ့ ကဗျာရွတ်သံတွေ ကြားချင်တယ်။ နောက်ပြီး မဗေဒါ သီချင်း မိုက်ကို ဆိုပြပါ'ခပ်ယဲ့ယဲ့ ခန္ဓာကိုယ်လေးကို မရင်း ကျွန်မ ရင်ခွင်ထဲမိုက်ကို မှေးစက်စေခဲ့တယ်။မိုက် မောနေပြီ။ ခြေဖျား၊ လက်ဖျားတွေလည်း အေးစက်လို့ကျွန်မ ရင်ခွင်ထဲ ခေါင်းမှီထားတဲ့ မိုက် ခန္ဓာကိုယ်။ မိုက် ခေါင်းက ရွှေညိုရောင် ဆံနွယ်ခပ်ကျဲကျဲ၊ အရင်နဲ့ တခြားစီပါပဲလား။ ငွေသိပ်ရှာချင်၊ ချမ်းသာချင်ခဲ့လား မိုက်။ အဖေအကြွေးဆပ်ပေးဖို့လား မိုက်။ နင် ပျော်ခဲ့လားလို့။ ကျွန်မ မမေးရက်တော့ပါ။'ဆိုလေ လီ'မဗေဒါ သီချင်းအပိုင်းအစကလည်ချောင်းဝမှာ ပျောက်နေခဲ့ပြီ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်မ မိုက်ကို ဆိုပြခဲ့တယ်။ ကဗျာတွေ ရွတ်ခဲ့တယ်။တစ်ညလုံးပါပဲ။မိုက်ရဲ့ မျက်ဝန်းက မျက်ရည်တွေ ရွှဲနေသလို ကျွန်မရင်တွေ ဆို့နစ်ကြေကွဲနေပြီ။ကျွန်မ လက်ကို ဆုပ်ကိုင်ထားတဲ့ မိုက်ရဲ့ လက်လေးတွေညသန်းခေါင်လောက်မှာ ပြေလျော့သွားတယ်။ကျွန်မ သိသလို၊ အားလုံးလည်း သိလိုက်တယ်။ကျွန်မ အားရစွာ မငိုနိုင်အောင် ရင်ထဲမှာ ခံစားမှုတွေကျပ်သိပ်နေတယ်။ မိုက် အိတ်ထဲက စာအုပ်လေးကို တွေ့ရတော့ ပိုဝမ်းနည်းလာရတယ်။ကျွန်မ လက်ဆောင်ပေးထားတဲ့ စာအုပ်ထဲက အကြောင်းအရာတွေထဲမှာ ကျွန်မနဲ့ သူ့အကြောင်းတွေခပ်များများ။မင်နီလေးနဲ့ နောက်ဆုံးရေးထားတဲ့ စာသားက -လူတွေ တော်တော်များများမိုက်ကို ခဏ၊ ခဏ ချစ်တယ်၊ ချစ်တယ် ပြောကြတယ်။ မိုက် အလိုချင်ဆုံးက အမေနဲ့ အဖေဆီက ချစ်တယ်ဆိုတဲ့ စကားပါ။တစ်ခါတစ်ရံမှာ ကျွန်မတို့ အထင်မှားတတ်ကြတာတစ်ခုက ကိုယ့်သိက္ခာ၊ ကိုယ့်အတ္တနဲ့ အပွန်းအပဲ့ မခံနိုင်ဘဲ ကိုယ့်စိတ်တွေကို ရှေ့တန်းတင်လိုက်တဲ့အခါတစ်ဖက်လူတစ်ဦးရဲ့ ခံစားမှုက အဆိုးဆုံး၊ အဆုံးစွန်ထိ ရောက်သွားတာကို မိုက်က သက်သေပြခဲ့တယ်။အဲဒီ ခပ်စောစော အချိန်က မိုက်ကို ဒီအမှောင်ကမ္ဘာကနေ ကျွန်မ ဆွဲထုတ်နိုင်ခဲ့ရင် မိုက်လိုသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကို ဆုံးရှုံးရမှာ မဟုတ်ပါ။ ဒီလောက်လည်း ကြေကွဲဝမ်းနည်းစရာကောင်းမှာမဟုတ်ပါ။ကျွန်မ ရင်ထဲမှာတော့ မိုက်ဟာ အမြဲတမ်း ရှိနေမှာပါ။အမြဲတမ်း ရှင်သန်နေမှာပါ သူငယ်ချင်း။မိဘနှစ်ဦးရဲ့ မေတ္တာကို လိုချင်မွတ်သိပ်ခဲ့တဲ့မိုက်။ ခုတော့ အတောင်ညောင်းသွားတဲ့ ငှက်လေးတစ်ကောင်လိုပဲ။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် မိုက် မိဘကချစ်တော့ချစ်မှာပါ။ ချစ်တယ်ဆိုတဲ့ စကားကို မပြောတတ်ကြလို့ နေမှာပါ။ ငါကတော့ နင့်ကိုအမြဲချစ်နေဆဲပါ မိုက်။ချောအိမာန် (မန္တလေး)ရွှေအမြုတေရုပ်စုံမဂ္ဂဇင်းအမှတ် ၂၅၈၊ မေ ၂ဝ၁၁
ရင်နာစရာ ကောင်းတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေး.. အဖွဲ့အနွဲ့ ကောင်းလို့ မျောပါသွားမိတယ်.
မိုက် နေရာမှာ ကိုယ်သာဆိုရင်လည်း အဲ့လမ်းကို လျှောက်မိမှာပါပဲ... မိုက်ကို အချိန်မီ မကယ်တင်နိုင်ခဲ့တဲ့ မတားနိုင်ခဲ့တဲ့ လီ့မှာလည်း အပြစ်မရှိပါဘူးလေ... မှန်တယ်ထင်လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တာက တချိန်မှာ နောင်တရတတ်တယ်ဆိုတာကလည်း အခြေအနေပေါ်လည်း မူတည်တယ်လို့ မြင်မိတယ် ဆရာမ..
Have read this piece in the magazine. This country was closed for so long that the people, just like its military men, haven't gotaclue about the outside world or the western societies. The prominent writers from 60s, 70s onwards such as Daw(s) Khin Ninn Yu, Moe Moe (Inyer), Ma Sandar, SanSan Nwent(thayawaddy) ,etc all used this stereotyping of their 'imagined' outside world in many of their works. It seems our generation writers still can't get out of this tradition . (the above comment is made looking this story in the wider cultural context since writers tend to think in his or her cultural conditionings). Yet I fully respect Chawei Mahn's rights to present this piece as an individual story.